तपाईलाई थाहा छ ? डोनाल्ड ट्रम्पको हत्या गर्ने प्रयास यसरी भएको थियो | जनदिशा
तपाईलाई थाहा छ ? डोनाल्ड ट्रम्पको हत्या गर्ने प्रयास यसरी भएको थियो
जनदिशा September 5, 2018	No Comments
सन् २०१८ को जुन १८मा राष्ट्रपतीय चुनावी अभियानको दौरान ‘माइकल स्टेभेन स्यानफोर्ड’ नामक २० वर्षीय ब्रिटिश नागरिक ट्रम्पको हत्या गर्ने प्रयास गरेको अभियोगमा समातिए । संयुक्त राज्य अमेरिकाको लस भेगासमा स्यानफोर्डले प्रहरीको पेस्तोल खोसेर ट्रम्प तिर सोझ्याएपछि उनलाई तत्कालै प्रहरीले गिरफ्तार गरेका थिए ।
हत्या प्रयासको आरोप लागेका स्यानफोर्डको बयान लिँदा उनले ट्रम्पलाई राष्ट्रपति हुनबाट रोक्नको लागि मार्न चाहेको बताएका थिए भने यो समाचारले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान खुब तानेको थियो । अमेरिकी संचारमाध्यमहरूले ट्रम्पलाई मार्न रूस, चीन या इरानको संलग्नता भएको हुन सक्ने भन्दै बारम्बार समाचार प्रेषित गरेका थिए ।
सीआइएले गरेको अनुसन्धान अनुसार स्यानफोर्डले एक वर्षदेखि ट्रम्पलाई मार्ने योजना बनाइरहेका थिए । त्यस दिन ट्रम्पको चुनावी र्यालीमा सहभागी हुनको लागि अग्रिम टिकट लिएका थिए र त्यसपटकमा ट्रम्पलाई मार्न नसकिएको खण्डमा अर्कोपटक प्रयास गर्ने स्यानफोर्डको योजना थियो । त्यसैले उनले एरिजोनामा हुने चुनावी र्र्यालीको पनि टिकट लिएका थिए ।
भनिन्छ, पेस्तोल प्रयोग गर्नुभन्दा पहिला स्यानफोर्डले चक्कु या राइफल प्रयोग गर्नेबारे पनि बिचार गरेका थिए ।
मेडिकल जाँचबाट हत्या प्रयासको आरोप लागेका स्यानफोर्ड एक पागल रहेको रिपोर्ट दिइएको भएता पनि धेरै अमेरिकीहरूले आज पनि त्यो आफ्नो देश बिरुद्ध षड्यन्त्र भएको मान्छन् । बेलायतले बारम्बार आफ्नो देशमा सुपुर्दगी गर्नुपर्ने भनेर अमेरिकालाई भनेपछि एक बर्षको जेल सजाय दिएर बेलायत फर्काइएको थियो ।
नोभेम्बर ८, २०१६मा ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उनलाई रूसको एजेन्ट भनेर आलोचना गर्न थालियो, त्यो मध्येको एउटा कारण स्यानफोर्डलाई कठोर सजाय नदिनु पनि थियो । अफगानिस्तान, लिबिया, इराक जस्ता देशहरूमा बिनाकारण आक्रमण गरेको, सिरियालाई अस्थीर बनाएर हतियार बेच्ने बाटो खोलेको तथा मध्यपूर्वको तेलमा आँखा गाडेको आरोप लाग्ने गरेको अमेरिकाका राष्ट्रपति संसारभरमा असुरक्षित राष्ट्रपति मानिन्छन् ।
ट्रम्पले आफ्नो सुरक्षाको लागि वर्षमा अर्बौं डलर खर्च गरेर अमेरिकालाई ऋणमा डुबाएको आरोप अमेरिकीहरूले नै लगाउने गर्दछन ।
Previous Previous post: शुरुमै उपचार गरे निको हुन्छ क्यान्सर रोग
Next Next post: मुलुकी ‘फौजदारी’ संहिता संशोधनको माग गर्दै ज्ञापन पत्र